ကျွန်ုပ်မှာဘာ hard drive ရှိသလဲ။ ဒီလှည့်ကွက်နှင့်အတူထွက်ရှာပါ! | Gadget သတင်း
ကျွန်ုပ်မှာဘာ hard drive ရှိသလဲ။
¿ဘယ်လို Hard drive ကိုသိလဲ? လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်အလွန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာအများစုသည် IDE အမျိုးအစား hard disk ကိုသာစဉ်းစားသည်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှာသာမန်ကွန်ပျူတာရှိရင်၊ Mac အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည် အချက်အလက်လွှဲပြောင်းမှုနှုန်းမြန်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် SCSI hard disk ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာအရင်စာပိုဒ်မှာဖော်ပြထားသလို IDE-type hard drive အကြောင်းပြောဖို့အရမ်းခက်တယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတခြားသူတွေနဲ့အစားထိုး, ကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာနှင့်သာ။ ကြီးမြတ်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၌ကွန်ပျူတာရှိပြီးသင် hard disk နှင့်ပတ်သက်သည့်ထပ်ဆင့်အချက်အလက်အချို့ကိုရယူလိုပါကဤအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းအချို့နှင့်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
1 Windows မှာဘယ်လို hard drive တွေရှိသလဲ
2 Windows ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive များနှင့်ပတ်သက်သောအထူးသတင်းအချက်အလက်
2.1 Piriform အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Windows မှာဘယ်လို hard drive တွေရှိသလဲ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows တွင်အလုပ်လုပ်နေပါက၎င်းကိုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို "တစ်ချက်ကြည့်ပါ" ကျွန်ုပ်တို့သည် "disk manager" ကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ "optimizer" ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလှည့်ကွက်ကိုသင်ကျင့်သုံးနိုင်အောင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။
ခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ Windows Start ဘယ်ဘက်အောက်ခြေကနေ။
ရှာဖွေရေးအကွက်ထဲတွင်«ပိုကောင်းအောင်» (သင့်တွင်အင်္ဂလိပ်လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိသည်ဆိုပါက) သင်၌၎င်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ရရှိပါက« Optimize units »ကိုရှာဖွေပါ။
ပြသထားသည့်ရလဒ်များမှ Windows tool ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒီ tool ၏ ၀ င်းဒိုးဒါမှမဟုတ် interface ချက်ချင်းပွင့်လာလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drives များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီပါလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းကိုသင်မလုပ်ပဲ (သင်အခြားမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း) interface ၏ထိပ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတွင်ထည့်သွင်းထားသော hard drive များစာရင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသည့်ဖမ်းယူမှုတွင်သင်ဤ hard drive များနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်သတိပြုမိရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဒုတိယကော်လံကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့တစ်ခုချင်းစီကိုကိုက်ညီတဲ့အမျိုးအစားကိုပြောပြသည်။ SSD နည်းပညာရှိသည့်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အလွယ်တကူခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ ထိုတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားသူများအတွက်တူညီသောအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် S-ATA အမျိုးအစားဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းရန်လွယ်ကူသော်လည်း SSD အမျိုးအစားအတွက်အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ IDE တစ်ခုနှင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုတည်းတွင်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
အခုဆိုရင်သင်သိကြောင်း Windows မှာဘယ်လို hard drive တွေရှိသလဲကျွန်ုပ်တို့၏ HDD သို့မဟုတ် SSD မော်ဒယ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအခြားနည်းလမ်းများကိုကြည့်ရှုမည်။
Windows ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive များနှင့်ပတ်သက်သောအထူးသတင်းအချက်အလက်
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်လှည့်ကွက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drives တွေအကြောင်းယေဘုယျအချက်အလက်များဆိုလိုသည်မှာနည်းပညာအမျိုးအစားနှင့်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်း၎င်းတို့သုံးနိုင်သောဆက်သွယ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ သင်၏လိုချင်သည့်အရာသည်သင်၏ HDD သို့မဟုတ် SSD နှင့်ပတ်သက်သောပိုမိုသောအထူးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာတွင်မည်သည့် hard drive ရှိကြောင်းသိရန်မည်သို့ရှာဖွေရမည်ဆိုပါကယခုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြမည့်ကိရိယာနှစ်မျိုးလုံးကိုသင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
Piriform အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ၎င်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ (သင်အထောက်အပံ့မတောင်းခံပါက) လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို tool ၏ interface တွင်အသုံးပြုသောအခါသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော hard drives များအားလုံးကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
အပေါ်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော screenshot သည်၎င်း hard drive တစ်ခုစီကိုပြသည်။ အထူးပြုသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ; ဒီမှာ SATA type နဲ့သူတို့ transfer transfer မြန်နှုန်းရှိမရှိငါတို့တွေ့နိုင်တယ်။
CrystalDiskInfo သည်သင်လုံးဝအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ င်းဒိုးပေါ်၌တပ်ဆင်မည့်ဗားရှင်း (သို့) လက်ပ်တော့တစ်ခုအကြားသင်ရွေးချယ်နိုင်သော download ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်မှတ်တမ်းများကို Windows အတွင်းမှမထားရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
ပေမဲ့ ဒီကိရိယာကကျွန်တော်တို့ကိုအထူးအချက်အလက်တွေလည်းပေးထားတယ်၊ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုနားလည်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ Hard disk အမျိုးအစား၊ ဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းမြန်နှုန်း၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှု၊ လက်ရှိအပူချိန်၊ အခြားဒေတာများစွာကြားတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
Hard Drive ကိုအလွယ်တကူမြန်ဆန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နည်း
အဲဒါကိုမှကြွလာသောအခါမည်သို့ပင်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက် သင့်ရဲ့ hard drive တွေအကြောင်းအရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုသိတယ်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သောအခြားရွေးချယ်စရာသုံးမျိုးသည်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။ မင်းရဲ့သံသယတွေကိုမင်းဖြေရှင်းပြီးပြီလားဆိုတာမင်းတို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဘယ်လို Hard drive ကိုသိလဲ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ထား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » ကျွန်ုပ်မှာဘာ hard drive ရှိသလဲ။
Not Roi အားစာပြန်ပါ
Tesla Model3သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀ မှသင့်အတွက်ဖြစ်သည်
SpaceX တွင်၎င်း၏ပထမဆုံး Falcon Heavy အဆင်သင့်ရှိသည်